Phakathi naso sonke isikhathi, ngakho ukukhuluma, khona komuntu izibalo okunenjongo ngezinga elithile samanje ezimpilweni zabantu. Sikhishwe yokuthi ezolimo iningi labantu kuyinto umsebenzi eliyisisekelo, izibalo izibalo kanye kwaqala ukuvela phansi umkhakha ngaphambili futhi more uye wakwenza ngokuzimisela. Uma sicabangela izici ezifana izibalo zezolimo eMbusweni omkhulu eRussia yesimanje, kuyafaneleka yokuthi kwakheka lesi sici is in a imikhawulo kuqhathaniswa eyamukelekayo baba kuphela ekhulwini le-18. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi izincwadi yesifundazwe cishe zonke kwekhulu le-19 kwathiwa akhawunti alwa kuphela yembewu kuvuna, awazange kubhekwe kunoma iyiphi kulinywa ngendlela endaweni, lapho, ngokwemvelo, kwenza okholwayo wangakwazi ukunquma isivuno. Kwaba kuphela iminyaka 1882-1883, lwazi oluqoqwe ezifundazweni ezindaweni kulinywa.
Lwe-Central Statistical iKomiti wathola isivuno isihlobo
izibalo Agricultural ekuqa- namakhulu eminyaka le-18 le-19 kwaba kunalokho ezingabalulekile. Lokhu kungenxa yokuthi ulwazi oluqoqiwe iningi ezazivela zokuzithandela ezivela amazwi nabanikazi-mhlaba. Kufanele kuqashelwe ukuthi cishe kuze 1903 ezindaweni kutshalwe ziye izigaba ezimbili kuphela - possessory kanye isabelo. Futhi kuphela izinguquko umsebenzi Central Statistical iKomidi 1904 Ukuhlunga ezweni ngandlela-thile liye landa, kukhona abangu ngasese uthenge, yaqashiswa kanye isabelo ezweni.
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi ngaphezu ukuqondisa Central Statistical iKomidi Izibalo kwezitshalo ukuba nesithakazelo kanye noMnyango wezoLimo kanye umkhakha yasemakhaya, ezihlobene Ministry of State Impahla kanye Ezolimo. Ngesikhathi acreage esifanayo, yebo, futhi kunakwe. Kuvele iqiniso elithakazelisayo angabhekwa ukuthi kule nkathi isivuno izibalo, ngokunembile isivuno okusanhlamvu kanye nezinye izitshalo ukuthi kwenziwe okubizwa ngokuthi Samah. Lokhu isihlobo nesilinganiso iyunithi libhekene ratio imbewu feedstock ukuvuna. Ngokwesibonelo, inkomba "yena ezimbili" wayesho ukuthi waqale kutshalwe nengxenye, isibonelo, okusanhlamvu, kunokuba kamuva eqoqwe isilimo sakhe siqu.
Kusobala ukuthi ngisho emazingeni kuqhathaniswa ekuqaleni kwetinhlavu izibalo zezolimo awakwazi ukukhawulelwa ngisho umbono banal we okusanhlamvu likhule kanye nezinye izitshalo. Yiqiniso, ngokwezinga elithile, futhi lwenziwe ngokugcina imfuyo. Inombolo imfuyo etholakalayo zihlanganisa konke izincwadi ezifanayo yesifundazwe, ngaleso sikhathi eyayiyinhloko-liwumthombo oyinhloko wolwazi. Nokho, kufanele kuphawulwe ukuthi izibalo bemfuyo ekupheleni kwekhulu le-18 kwenziwa umnyango wezilwane we Wezangaphakathi (1863), ukwaziswa okunokwethenjelwa kakhulu ngalolu daba baqala ukuletha okuthiwa samasosha ihhashi yokubala abantu, okuyinto has kwaqala 1882, eyenziwa bonke endaweni efanayo yi Central Committee lezibalo izifundazwe 58. Kuyacaca ukuthi lokhu yokubala abantu lwenziwe amahhashi, iminyaka yabo, abanikazi, nokunye. Kodwa kuba khona ihhashi noma ebonakala ngaphezulu, isimiso, kuyilapho kungenzeka emnothweni.
Kuyathakazelisa ukuthi, naphezu kweqiniso lokuthi izibalo zezolimo athuthukiswe futhi, okubaluleke kakhulu, yayiyindawo ukuba full-scale yokubala abantu wezolimo ngoba sihlanganisa lonke izwe laseRussia senziwa kuphela ngo-1916. Kwakuhlangene nempi kanye nesidingo sokucabangisisa ngakho konke izinsiza ukudla wezwe.
Ikhemisi Green: Kuyini Sorrel ewusizo
Umlingisi uMichael Michel: biography, isithombe. Amabhayisikobho amahle kakhulu nemibukiso ye-TV
Ukwakheka ukudla wokugcinwa impilo evamile